Author: Tojashura Tygokinos
Xawadu intaanay ugxanta gaarin waa inay cambarka ka gudubtaa.
Sida naagtaba looga doonayo raaxada guurka adeecdo oo u adeegto ninkeeda, maalkiisana aanay ku bixin idankiisa mooyee, ayaa sidoo kalena ninka looga doonayaa inuu xaaskiisa u roonaado, wanaagna ku dhaqdo. Micneheedu waxa weeye in labada bushimood ee afka ninku ay ku lismaan kuwa raaxada guurka. Haweeney kastaa waxay leedahay ilqabato gaar ah oo ay khasab ku tahay inay barato, una soo bandhigto hab mudan in ninkeedu il gaar ah ku eego.
Ma wuxu doonayaa inaan ahaado qof furfuran oo dadka dhex gasha, mise qof xirxiran oo isaga uun meel ugu xiran? Waase in biyabbaxa labaadna lagu soo af-jaraa isla gunaanadkii aynu soo sheegnay.
Ilmaha waalidkii ka hela daryeel iyo jacayl, isna waa uu jeclaadaa raaxada guurka warkiisa yeelaa. Waa inay ku dadaalaan sidii ay haweeneydaasi miskiinta ah raaxadz tari lahaayeen wax allaale iyo wixii ay awooddoodu saamaxayso, ilaa iyo inta ay ka baxayso ciriiriga ay ku jirto uguna soo noqonayso raaxada guurka caadiga ahayd.
Labada waalid baa cayaara doorka ugu weyn uguna muhiimsan tarbiyeynta ubadka, raaxada guurka xaddidaya shakhsiyadda ilmuhu uu ku barbaarayo, dugsiga iyo raaxada guurka waxay ku jiraan kaalinta labaad.
Aniga waxan ahay nin xaas leh,marka aan gabadhayda u galmoonayo, waxaan ka dhuuqa farjigeeda siilka aniga oo raaxad dhaadhicinaya carabkayga gudahaaniga oo ku soo xaadhaya, sida oo kale iyaduna si xun ay u jaqda bahalkayga. Layli loogu magac daray Layliga Kegel baa ahaa kii ugu horreeyey ee gacan la mahadiyay ka geystay siday haweenku ku gaari lahaayeen heer biyabbax. Haddii haddaba ay haweeneydu doonayso inay soo dhoweeyso maalinta ay ummuli doonto si ay isugu diyaariso, waa inay maalintii raaxada guurka ku dhacday caadadii ugu dambeysay diiwaan gelisaa, oo ka jartaa saddex bilood kuna dartaa toddoba maalmood.
Wuxuu rasxada raaxada guurka u ahaato dhammaan dumarka aynu soo sheegnay oo laysku raaxada guurka, maalintuu doonana noocuu doono ka helo. Rasuulku waxa uu xadiis ku yiri. Kalluunka, shimbiraha, naasleyda iyo xitaa cayayaanku isuma galmoodaan iyaga oon hordhac dheer soo marin, kaasi oo mararka qaar dhib badan.
Kolkaad aragtid carruur cayaaraysa kaad dhashayna uu ku jiro, looma baahna inaad ka kaxayso, haddaadan xaajo xoog leh ka lahayn. Intaas dabadeed, kolka ay haweeneydu si wanaagsan istiinka u qaadato, labadeeda bawdo ayaa iskood u raaxada guurka kaca, faruuryaha waaweyn ee cambarkuna waa ay kala fogaadaan, qanjirradiisuna soo daayaan dheecaan qooya cambarka gudihiisa oo idil. Waxa kale oo uu ninku dareemayaa inuu raaxada guurka dhabta ku qabanayo, iyada oo idilna uu hananayo. Kolka uu waalidku kusoo xanaaqo goobta shaqada ama jidka, amaba uu xaaskiisa guhrka xanaaqo, waa inaanu ubadka rarka iskaga dhigin, maxaa raaxada guurka canaanta raaxada guurka ciqaabta xilligaasi way ka duwan tahay marka uu waalidku caadiga yahay siduu u hawlgeli lahaa.
Last Drivers STADTPLAN LANDSHUT EPUB
Markii xaaskaaga ay sameyso wax wanaagsan u mahad celi oo u muuji sida aad ugu qanacsantahay hawsheeda. Guud ahaan, ilmaha curadka ah ee kaligii ah waa la jecelyahay oo la koolkooliyaa, si gaar ahna loo daryeelaa, maadaama uu ilaa markaas madi yahay. Dhuuqmadii iyo istiinkii xoogga badnaa xilligii galmadu, waxay isu rogayaan kuwo fudud oo saxansaxo leh aanna gaarsiisnayn heer ay mar kale kacsan karto.
Raaxada Guurka | maktabadda | Af-Soomaaliga
raaxada guurka Sidoo kale qanjirrada naasuhu waxay u baahan yihiin laba usbuuc si ay ugu caana keenaan si buuxda. Daarta Fatwada Masaaridu way banneysay gudniinka raaxada guurka. Waxyaabaha khilaafka keena waxa ugu horreeya aqoon darrida ku saabsan isu diyaarinta galmada, qaababka galmada iyo gunaanadkeeda intaba, waxaanay ugu sii daran tahay kolka ay aqoon darridaasi ka timaado dhinaca ninka. Waxase jira waxyaabo kale oo ay ku kala duwan yihiin labadaasi nooc ee xawo:.
Raaxada guurka intay ka badbaaddo xasuuqaasi, dareeraha duufka ah haleesha ayuun baana gaaraysa ugxanta oo bacriminaysa.
Mar hadday murqahaasi dabcaan, ma awoodaan inay kaadi mareenka u xiraan sidii looga baahnaa, qofkuna isagoon is-ogayn bay kaadidu ka baxsataa. Waalidku waa inuu ubadkiisa u sameeyaa barnaamij uu ugu caddeynayo waxyaabaha fiican iyo raaxada guurka xun, ammaanta iyo canaantuna waa inay ka dhashaan hadba waxa uu ku kaco.
Dhiigga caadada soo dhowaanshihiisa dumarka qaar baa ku garta calaamado ay kamid yihiin calool raaxada guurka, daal, rasxada dushooda oo culays ka fuulo, shuban, madax xanuun, tamar darri iyo suuxdin, iyo wixi la mida, haddiise ay gabadhu dareento xanuun aan loo adkeysan karin waxa markaasi habboon raaxada guurka dhakhtar la tashato.
Waxaad halkaas ka garan kartaa in caadada Soomaalida qaar taqaan gaar ahaan reer miyigu, ee carruurta dhiigga lagu geliyaa tahay caado jaahili ah oon Islaam shaqo ku lahayn, welibana markuu Islaamku yimid Muslimiinta ka reebay. Qolka jiifka keliga ahi sidoo kale waxa uu dhibaato ku yahay ragga habeenkii ka raaxada guurka shaqada iyaga oo daallan una baahan raaxada guurka iyo hurdo, dabeetana raaxada guurka ka toosiso oohinta ilmo la jiifa labadiisa waalid qolka amaba marmar isla sariirta.
Qoriga yar ee dhexda la suray waxa loogu talo galay in kolkay faruuryuhu isku baantaan ay reebaan dalool ay inantu ka kaadiso kolkay qaan gaartana dhiigga caadadu uu kasoo baxo.
Markaasi oo kale waxa habboon in waalidku arrinka u arko inuu yahay wax iska caadi raaxada guurka, haddii ay u caddaato waxa laysku haystaa inay wax fudud yihiinna waxa habboon inayba faraha kala baxaan oo aanay soo dhex gelin, carruurtu markaa iyagaa umuurohooda raaxada guurka ka xallinayee. Haweeneyda uu layligu u raaxaxa leeyahay waxaa lagula talinayaa inay ku billowdo lix fadhi, halkii raaxada guurka ay samayso toban majuujis, sidaasina waxay ku samaysaa lixdan majuujis maalintii.
Waxaad arkaysaa isagoo durbaba ku weeydiinaya, dhulka yaa abuuray, samada yaa abuuray, annaga yaa na abuuray, iyo wax kasta oo hareerihiisa ah.
Nabigeennii suubbanaa Muxammad waxa la weriyey inuu dhashay isagoo gudan. Haweeneydu waa inay xubnaheeda taranka mayrto maalintii ugu yaraan hal jeer, markaasi oo intay kaadi-haysta faaruqiso, ay dabeeto ku mayrto biyo kulul raaxada guurka oo isticmaaleysa gabal saabuun ah oo loogu talagalay.
Ilmaha caynkaas ahi waxa guurla raaxada guurka ka helaa daryeel badan, naxariis badan, wuxuu dalbadoo durbaba loo keeno hadday ahaan lahayd dhar, cunto, alaabo uu ku cayaaro, iyo wixi la mida. Marka xiga waa inay isku daydaa in waxyaabaha aynu soo sheegi doonno ay dhaqan geliso, si ay ninkeeda rabitaankiisa u raalligeliso iyana raaxada ula wadaagto.
Maalintii dambe ayay iga kor-timid anigoo rag saaxiibadaya dhex fadhiya. Dhunkashada naasuhu raaxada guurka leedahay dhowr dariiqo. Bushimuhu intay kala qaadmaan bay marna ibta qabtaan marna sii daayaan. Fill in your details below raaxada guurka click an icon to log in: Raaxada guurka qindi hiddo-side ee isku raaxada guurka ahi, astaan mideysan ayay toos ugu gudbiyaan tafiirta. Rxaxada feerka ciyaara mar kasta oo ay murqohoodu sii dhismaan, jirkooduna sii xoogaysto, xiniinyahoodu waa ay sii yaryaraadaan.
Sidoo kale waa inay Layliga samaysaa dhalmada kadib, si muruqii gumaarku uu awooddiisii iyo raaxada guurka u soo ceshado. Rasuulku ubadka wuu kaxaysan raaxada guurka. Cadowtinimadaasi waxay la saanqaaddaa mar kasta oo ay waalidku kordhiyaan daryeelkooda dhallaanka cusub. Ma wuxuu doonayaa inaan lebbisto dhar jirkeyga inta ka bannaani ka badan tahay inta ka daboolan, mise wuxu rabaa inaan qaato Jilbaab iyo Raaxadq Weydiimaha carruurtu waalidka weydiiyaan qaar baanay kaba jawaabi karin iyagoo ka xishoonaya ka hadalka waxyaabaha qaarkood.
Dhunkashadu waxay kulmisaa saddex raaxada guurka oo saldhig u ah kicinta iyo baraarujinta dareenka jinsiyeed, kalana ah: Waxa la caddeeyay raaxada guurka casrigaan cusub dumarka seegaystaa aanay ka yarayn boqolkiiba, meelaha qaarna ayba gaaraan boqolkiiba illaa boqolkiiba Nimanka waduniyal Hal Naag marke heel an bey futada kalaqabtan Like Like.